Stress – Page2– Healthy Life Journal
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်(Covid-19)ကြောင့် သားသမီးအတွက် မိခင်ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုသက်သာအောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ. . .
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. အခုကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မအကြောက်လွန်နေလို့ပါ။ သားနဲ့သမီးက စာမေးပွဲပြီးသွားလို့ တော်သေးပေမယ့် သူတို့ကို သင်တန်းတွေမတက်ခိုင်းရဲဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့က ပန်းချီသင်တန်း၊ ရေကူးသင်တန်း တက်ချင်တယ်လို့ ပူဆာနေတာ ကျွန်မစိတ်ထဲ စိုးရိမ်စိတ်များနေလို့ ဝေခွဲမရဖြစ်နေပါတယ်။...
ပူပင်သောက လျော့ပါးစေမည့် သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေပြထားသော နည်းလမ်း ၆ သွယ်
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နည်းလမ်း (၁) တစ်ည ၇-၉ နာရီ အိပ်စက်ခြင်း အိပ်ရေးပျက်တာနဲ့ ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်တာတွေက တစ်နေ့တာအတွင်း ပူပင်စိတ်ကို တိုးစေပါတယ်။ ညဘက်မှာ အိပ်ချိန်ပုံမှန်ရှိပြီး အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်စက်အနားယူနိုင်ဖို့ ညဘက်မှာ ပရိုတင်းပါတဲ့ အသား၊ နွားနို့ချိုချိုသောက်ပါ။...
ရေတံခွန်ဆီသွားပါ စိတ်ဖိစီးမှုများနေသလား၊ ရေတံခွန်ဆီကို သွားပါ။ ရေတံခွန်ရဲ့အခြေရှိ လေထဲမှာ လွင့်နေတဲ့ မော်လီကျူးအမှုန်တွေက စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ဝက်စ်လီရန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုအရ ၁၅-၃၀ မိနစ်လောက် ရေနဲ့ပက်ဖျန်းပေးတာက စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ဦးနှောက်ထဲမှာ စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေတဲ့ ဆီရိုတိုနင်ပမာဏကိုတိုးစေလို့ပါ။...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ဘဝမှာ နေ့စဉ်လိုလို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒါကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ စိတ်ခွန်အားရှိရပါမယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကောင်းကောင်းစား၊ အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ဦးနှောက် စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရချိန်မှာ ဟိုက်ဟိုသားလမတ်စ်က ပစ်ကျူထရီ ဂလင်းကို အချက်ပြပြီး...
အိမ်ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေမည့် နည်းခြောက်သွယ်
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အိမ်ပြောင်းရွှေ့ရတာက ဘဝမှာစိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ အိမ်ပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့တင် လေးလံနေတဲ့ အပြင် အိမ်ထဲက တိုလီမုတ်စပစ္စည်းတွေကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရပါ့မလဲလို့လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ အိမ်ပြောင်းရွှေ့တာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုအနည်းဆုံး ဖြစ်စေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။...
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ အပျိုဖော်ဝင်ပြီးစ မိန်းကလေးတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် လစဉ်ရာသီစက်ဝန်း ကမောက်ကမ ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား ဆရာ။ ဖြေ ။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရာသီစက်ဝန်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် အပျိုဖော်ဝင်စမိန်းကလေးတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတယ်၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေများတယ်။ အဲဒီအတွက် သူတို့က...
နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှု ဘယ်လိုအနိုင်တိုက်ကြမလဲ . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္တသိုလ်) နေ့တိုင်းလိုလို ရုန်းကန်သွားလာနေရတဲ့ ဘဝ မှာ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ အနည်းနဲ့အများတော့ ရှိစမြဲပါ။ တကယ်တမ်းပြောရရင် စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို စိတ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ခံစားမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေတွေကဖြစ်လာတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့တင်းအားကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့...